चीनले दियो यस्तो जवाफ, के तपाईंका सैनिक पनि मारिएका छन् ? — Ratopost.com News from Nepal
चीनले दियो यस्तो जवाफ, के तपाईंका सैनिक पनि मारिएका छन् ?
एजेन्सी । पूर्वी लद्दाखको गलवान घाटीमा भारत र चीनको सीमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा दशकौं पछि पुनः तनावको स्थिती पैदा भएको छ ।
भारतीय मिडियामा पनि मंगलबार यहि कुराको छलफल भइरह्यो । केहि मिडियाले चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको संख्या नै तोकिदियो । तर अहिलेसम्म यसबारे केहि स्पष्ट जानकारी छैन । बुधबार यहि प्रश्न चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा समाचार एजेन्सी पिटिआईले प्रश्न सोधेको छ । जसमा पत्रकारले सोधेका छन्, ‘भारतीय मिडियामा चिनियाँ सैनिक हताहत भएको बताइएको छ, के तपाईं यसलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ ’
पिटिआईले सोधेको ‘अब सीमामा हिंस्रक झडप हुँदैन ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाओ लिजियानले भने, ‘स्पष्ट छ कि अब हामी थप विवाद चाहँदैनौं ।’बीबीसी